Raad Raac News Online – Shirweynihii Ururka Midnimo oo maanta ka dhacay Garowe
Shirweynihii Ururka Midnimo oo maanta ka dhacay Garowe
Moos Bukeeni February 2, 2013 0
Shirweynihii koowaad ee urur siyaasadeedka Midnimo oo ka mid ah ururada siyaasada ka hana qaaday degaanada Puntland oo maanta lagu qabtay magaalada Garowe
Shirweynaha Koowaad ee Urur siysaasadeedka Midnimo oo ka mid ah Ururada siyaasada ee ka jira degaanada Puntland ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Garowe iyadoo sida la sheegay uu socon doono mudo laba maalmood ah.
Shirkan oo ay ka soo qeybgalleen ergooyin kale duwan oo ka kale yimid degaanada degmooyinka iyo gobolada Puntland ayaa waxaa goob joog ka ahaa xubnaha ugu sareeya ururkaasi.
Qaar ka mid ah xubnaha golaha wakiilada Puntland ee ka mid noqday urur siyaasadeedkan Midnimo iyo ergooyinkii kale duwannaa ee isaga kale yimid degaanada Puntland oo madasha lagu qabtay shirkan ka hadlay waxay sheegeen in nidaamka furashada ururada ay tahay mid lagama maarmi doono habkii qabaa’ilka ahaa ee uu ka imaan jiray qofka qabanaya hogaanka Maamulka Puntland.
Gudoomiyaha ku meel gaarka ee urur siyaasadeedkan Midnimo Dr Saadiq Eenoow oo shirkan ka hadlay ayaa waxaa faah faahin ka bixiyay dadka sida gaarka ah kaga dambeyay dhismaha urur siyaasadeedkan Midnimo.
Sidoo kale gudoomiyaha ku meel gaarka ee Ururkan ayaa waxaa uu sheegay in ciidanka ka jira gobolada Puntland aysan marnaba ka qeybqaadan dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaalia wixii ka dambeeyay bur burkii dowladii dhexe ee dalka sanadii 1991kii.
Qabashadan shirweynaha kowaad ee urur siyaasadeedka Midnimo oo noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa oo kale ah uu ka dhaco magaalada Garowe ayaa mudada labada maalmood ee uu socon doono lagu soo dooran doonaa cida noqoneynsa gudomiyaha saxda ah ee urur siyaasadeekan Mindmo.
Warkii oo dhamaystiran iyo Codadkooda dhowaan kala soco Raad Raac oo weliba la soo faahfaahiyay